Public Health in Myanmar: June 2008
ဆီးချိုကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်သည့် နောက်ဆက်တွဲရောဂါများ ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး သွေးထဲရှိ သကြားဓါတ်ကို အမြဲတမ်း ပုံမှန်ဖြစ်နေစေရန် ထိန်းညှိ ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆီးချို ရောဂါသည် သွေးထဲ သကြားဓါတ် အလွန်အမင်း များခြင်း အပေါ်တွင် အရင်းခံသော်လည်း Diabetes Complication သည် သွေးထဲသကြားဓါတ် အလွန်အမင်း နည်းသည့်အခါတွင်လည်း ဖြစ်သောကြောင့် နှစ်ခုစလုံးကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်များကို ရောဂါသည်များ ကောင်းစွာ နားလည်ထားရမည်။ သို့မှသာ ရုတ်တရက်နှင့် နာတာရှည် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများ (Acute & Chronic complications) များကို ကောင်းစွာ ကာကွယ်နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ဤသို့ ကာကွယ်ခြင်း သည်ပင် Diabetes Management ဖြစ်သည်။
ပထမဦးစွာ ဆေးလိပ် သောက်သူဖြစ်ပါက ဆေးလိပ် ဖြတ်ရမည် ဖြစ်ပြီး အ၀လွန်သော Type2သမားများသည် ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျှော့၍ ပိန်လွန်းသော Type 1 သမားများသည် ကိုယ်အလေးချိန် ပုံမှန် ဖြစ်အောင် လုပ်ရမည်။ လူတယောက်တွင် ရှိသင့်သည့် ကိုယ်အလေးချိန်ကို Body Mass Index (BMI) ဖြင့် တိုင်းတာပြီး BMI 20-25 အထိကို ပုံမှန် ရှိသင့်သော ကိုယ်အလေးချိန်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ တွက်နည်းမှာ ကိုယ်အလေးချိန် ကီလိုဂရမ်ကို အရပ် စတုရန်းမီတာဖြင့် စား၍ (kg/m2) ရရှိသော အဖြေဖြစ်သည်။ ဥပမာ ကိုယ်အလေးချိန် 51kg နှင့် အရပ် 155cm=1.55m ရှိသူအတွက် 51/(1.55)2 = 21.2 ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဟာရနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းဖြင့် ဆီးချိုရောဂါ သမားများသည် ကိုယ်အလေးအချိန်ကို BMI 20-25 အတွင်း ထိန်းနိုင်လျင် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာ များကို တစိတ်တဒေသ အားဖြင့် ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။ Type2Diabetes ကို ပုံမှန် ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းပြီး ရာနှုန်းပြည့် နီးပါး ကာကွယ်နိုင်သည်။
ဆီးချိုရောဂါအတွက် အာဟာရ သီးသန့် သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိ်(Diabetes Australia, 2003) ပဲ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်အနေဖြင့် အဆီလျှော့ စားခြင်း၊ သကြားကို လုံးဝရှောင်ခြင်း၊ တခြား အချိုပါသော အစား အသောက်များနှင့် အသီးနှံများ စားနိုင်သော်လည်း ချင့်ချိန်၍ စားခြင်းတို့ကို အဓိကလိုက်နာရမည် (Dr Carter, 2005)။ ထို့ကြောင့် ယေဘုယျအားခြင့် သာမန် Healthy Diet အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့် စံအတိုင်း ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ကို အများဆုံးစား၍ တခြား အဟာရများမှ ဟင်းသီးရွက်ကိုများများ၊ နို့ထွက်အစားအစာများနှင့် အသားငါးကိုအသင့်အတင့်၊ အဆီနှင့်ဆားကို နည်းငယ်သာစားခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်သည့် Food Pyramid အတိုင်း လိုက်နာနိုင်ပါသည်။ ဆီးချိုရောဂါအတွက် အဟာရနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက Dr Win Thein ရေးသည့် Diet for Diabetes ကို http://health.ngoinmyanmar.org/search/label/diabetes မှာလည်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Sexual Dysfunction သည် ဆီးချိုရောဂါကြောင့် လိင်အင်္ဂါများသို့ သွားသော နာ့ဗ်ကြောနှင့် သွေးကြောများကို ထိခိုက်သောကြောင့် ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများတွင် အရည်ထွက်နည်းခြင်းနှင့် အမျိုးသားများတွင် လိင်တံတောင့်တင်းမှု အားနည်း၍ လိင်ဆက်ဆံစဉ် သုတ်မထုတ်နိုင်ခင် လိင်တံပျော့ခွေခြင်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။
အူယောင် ငန်းဖျား (တိုက်ဖွိုက်) ရောဂါ
တိုက်ဖွိုက်ရောဂါဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအချို့မှာ အဖြစ်များ ရောဂါတစ်ခု အဖြစ် ရှိနေဆဲပါပဲ .. ကျွန်တော် တာဝန်ကျ ခဲ့တဲ့ ရမ်းဗြဲကျွန်း ပေါ်က ကျောက်ဖြူနဲ့ ရမ်းဗြဲမြို့ တွေမှာ အခုထိ တိုက်ဖွိုက် ရောဂါအဖြစ်များ
တုန်းပါ ... ရက်ခြား ဆိုသလို တိုက်ဖွိုက် ရောဂါကြောင့် ဖျားတဲ့သူ ... အူပေါက်တဲ့သူ အမြဲတွေ့ နေရပါတယ် ... တိုက်ဖွိုက် ရောဂါဟာ Salmonella typhi နဲ့ Salmonella paratyphi A & B ပိုးတွေ ကြောင့်ဖြစ် ရတာပါ ... Salmonella typhi ပိုးဟာ ပိုမို ပြင်းထန်ပြီး paratyphi A & B ကတော့ ပြင်းထန်မှု လျော့ပါတယ် … ... ဒီပိုး တွေဟာ လူ့အညစ်အကြေး မစင် ကနေ တစ်ဆင့် ကူးစက်တာမို့ သန့် လေးသန့် ဆိုတာကို လိုက်နာမယ် ဆိုရင် ကူးစက်ခံရမှု ကင်းဝေး ပါမယ် … တိုက်ဖွိုက် ရောဂါပိုးဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ၀င်ပြီး ၁၀-၁၄ ရက်လောက် ကြာမှ ရောဂါ လက္ခဏာ ပြပါတယ် ... ဆေးကုသမှု ပြီးပြည့်စုံအောင် မခံယူဘူးဆိုရင် ရောဂါ ခံစားရမှု သက်သာပေမယ့် တိုက်ဖွိုက် ရောဂါပိုး နာတာရှည် သယ်ဆောင်သူ အဖြစ် စာရင်းဝင် သွားပါလိမ့်မယ် … တိုက်ဖွိုက် ရောဂါပိုး ဟာ ခန္ဓာကိုယ် သည်းခြေ အိပ်ထဲမှာ လပေါင်း နှစ်ပေါင်း ချီပြီး ခိုအောင်း နေနိုင်ပါတယ် ... အချို့မှာတော့ သည်းခြေအိပ်ဖြတ်ထုတ် ပစ်ရတဲ့အထိ ဖြစ်ပွား တတ်ပါတယ်…
1. ပထမပတ် အတွင်းတွင်
* အပူချိန်ဟာ တဖြည်းဖြည်း လှေကားထစ်ပုံစံ ၄-၅ ရက်အတွင်း မြင့်တက်လာခြင်း၊
* ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခြေလက်ကြွက်သားများ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်လာခြင်း၊
* ၀မ်းချုပ်ခြင်း၊ (အချို့ကလေးငယ်များတွင် ၀မ်းလျောပြီးအန်တတ်ပါတယ်..)
* အပူချိန်မြင့်သလောက် သွေးခုန်နှုန်းမြင့်တက်မလာခြင်း၊ (ဥပမာ - အပူချိန် ၁၀၃-၁၀၄ံF ဖြစ်နေတောင်မှ သွေးခုန်နှုန်း တစ်မိနစ် ၈၀-၉၀ ခန့်သာ ရှိနေခြင်း) (Relative Bradycardia)
2. ဒုတိယပတ် အတွင်းတွင်
* ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် အနီအစက်ပြောက်များပေါ်လာခြင်း (Rose spots) (ပုံတွင်ကြည့်ရန်)
* ချောင်းဆိုး လာခြင်း၊ နှာခေါင်းသွေး ယိုလာခြင်း၊ ဘေလုံး ကြီးလာခြင်း၊ ဗိုက်ဖောင်း ဗိုက်ကယ် ဖြစ်လာခြင်း၊
* ဝမ်းချုပ် နေရာမှ ဝမ်းလျှော လာခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက် ထိလျှင် နာကျင်လာခြင်း
3. ဒုတိယပတ်အကုန် တတိယပတ်အစထိ
မှန်ကန်သော ဆေးကုသမှု မခံယူရပါက လူနာ ကယောင်ကတမ်း ဖြစ်လာခြင်း၊ နောက်ဆက်တွဲ လက္ခဏာများ ပေါ်လာခြင်း၊ သတိမေ့မျော အသက်ဆုံးရှုံး သည်ထိ ဖြစ်တတ် ပါတယ် ...
1. အူပေါက်ခြင်း၊ အူမှသွေးထွက်လွန်ခြင်း၊
2. ရောဂါပိုးပြန့်နှံ့မှုကြောင့် အရိုးနှင့်အဆစ်တွင် ရောဂါပိုးစွဲခြင်း၊ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ခြင်း၊ သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်း၊
3. နှလုံးကြွက်သားရောင်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ် ရောင်ခြင်းတို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ..
* တိုက်ဖွိုက်ရောဂါပိုးကို နှိမ်နှင်းနိုင်သော ဆေးအမျိုးပေါင်း များစွာ ရှိပါတယ် ... အရင်ကတည်းက သုံးလာခဲ့တဲ့ chloramphenicol, ampicillin ဆေးများဟာ အချို့ဒေသတွေမှာ ဆေးမတိုး ဆေးယဉ်ပါး လာတာကြောင့် အားကိုးပြီး သုံးစွဲဖို့ မသင့်တော် တော့ပါဘူး..
* Fluoroquinolones အုပ်စုဝင် Ciprofloxacin 500 mg တစ်လုံး ၁၂ နာရီခြား (တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်) ၁၄ ရက်သောက်ရန်အတွက် ပထမဆုံး ရွေးချယ်မှု အနေနဲ့ သတ်မှတ် ထားပါတယ် ... Fluoroquinolones ဆေးတွေနဲ့ မသင့်တော်သူ များအတွက် 3rd Generation Cephalosporins, Macrolides ဆေးများကို ရွေးချယ် ဖို့ဖြစ်ပါတယ်..
* အစားအသောက်အနေဖြင့် မာသောအစာ၊ အဖတ်များကို ရှောင်ပြီး အာဟာရဖြစ်စေသောအရည်များနှင့် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည်များကိုသာ စားသုံးရပါမယ်..
* တိုက်ဖွိုက် ရောဂါဟာ ရေနဲ့ အစားအစာ ကနေ တစ်ဆင့် ကူးစက် တာမို့ သန့်လေးသန့်ကို လိုက်နာ ကာကွယ်ဖို့ လိုပါတယ်…
* နောက် ကာကွယ်ရေး နည်းလမ်းကတော့ တိုက်ဖွိုက် ကာကွယ်ဆေး ထိုးတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ် … မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ Sanofi Pasteur မှထုတ်လုပ်ပြီး Thet Paing Soe company မှ တင်သွင်းတဲ့ (Typhim Vi ) ကာကွယ်ဆေး ရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ... ကာကွယ်ဆေး တစ်ကြိမ် ထိုးလျှင် (၃)နှစ် ရောဂါ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် ... ယခုအခါ နာဂစ် လေမုန်တိုင်းခံ ဒေသများမှ ပြည်သူများအား NGO အဖွဲ့တစ်ခုမှ တိုက်ဖွိုက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး(Typhim Vi) ကို ထိုးနှံပေးလျက် ရှိကြောင်း ကြားသိရပါတယ်..
အားလုံး ဗျဿနတရားငါးပါးမှ အမြန်ဆုံးကင်းဝေးနိုင်ပါစေ…
Posted by Dr. Win Thein0comments
Posted by byakga0comments
ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်စဉ် နှင့် အင်ဆူလင် ဟော်မုန်း ဆက်နွယ်မှု
ဆီးချိုရောဂါသည် ကမ္ဘာတွင် အဖြစ်များဆုံး နာတာရှည်ရောဂါများအနက် တခု အပါအ၀င် ဖြစ်ပါသည်။ ဆီးချိုရောဂါ ရှိသည်ဟု စစ်ဆေး တွေ့ရှိပြီး ရောဂါ သတ်မှတ် ခံထားရ သူများသည် ဆီးချိုနှင့် ပတ်သက်သည့် ရောဂါဖြစ်စဉ်ကို အတိအကျ နားလည်ရန် အထူးလိုအပ် သောကြောင့် ကျန်းမာရေး ပညာပေးသူများ အနေဖြင့် လူနာအား နားလည်အောင် ပညာပေး အစီစဉ်များ လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိ ပေသည်။ လူနာများ မှလည်း ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ၏ လမ်းညွှန်မှုကို မသွေမတိမ်း လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဆီးချို ရောဂါသည် ပျောက်ကင်း အောင် ကုသ၍ မရသော ရောဂါ ဖြစ်သောကြောင့် ရောဂါလက္ခဏာကို ထိန်းချုပ်ပြီး ဆက်ပွား ရောဂါများ မဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ်ခြင်း သည်သာ ၎င်း၏ အဓိက ကုသမှု ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ရောဂါအား နိုင်နိုင်နင်းနင်း ထိန်းချုပ် နိုင်ပါက ဝေဒနာရှင်သည် ပုံမှန်အတိုင်း သက်တမ်းစေ့အောင် အသက်ရှင် နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆီးချို ရောဂါ ဝေဒနာ ရှင် များသည် ပုံမှန် ကျန်းမာသူ နီးပါး စိတ်ချ ယုံကြည်စွာ ဆက်လက် အသက်ရှင် နေနိုင်ရန် အတွက် ဆီးချိုကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်သော ဆက်ပွား ရောဂါများ ကိုလည်း နားလည် ထားရန် အထူး လိုအပ် ပေသည်။ ဤသို့ နားလည်ထား မှသာလျင် မိမိရောဂါကို ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ကျရောက် လာနိုင်မည့် ဆက်ပွားရောဂါ အန္တရယ်ကိုလည်း အလေးအနက် ထားပြီး ကာကွယ်နိုင်မည် ဖြစ်ပေသည်။
ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းကို အတိအကျ ရှာဖွေ ဖေါ်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေး သော်လည်း လက်ရှိ လေ့လာချက် များအရ မျိုးရိုးဗီဇ၊ လူမျိုးနွယ်စုနှင့် ဘ၀လူနေမှုပုံစံ စသည်တို့ အပေါ်တွင် များစွာ အခြေခံသည်ဟု သိရှိထားပါသည်။ ဆီးချိုရောဂါသည် ပန်ကရိယမှ အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းကို ပုံမှန် မထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အင်ဆူလင် ဟော်မုန်းကို ဆဲလ်များမှ ပုံမှန်အတိုင်း အသုံးမချနိုင်ခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ရောဂါ ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ သွေးထဲ၌ အချိုဓါတ် (Glucose) လွန်ကဲခြင်းနှင့် အခြားသော ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း အစာဓါတ် ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှု (food Metabolism) ချွတ်ယွင်းခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဆီးချိုရောဂါတွင် အင်ဆူလင်ဟော်မုန်း မထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် လုံလောက်စွာ မထုတ်လုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော Insulin Dependence ခေါ် Type 1 Diabetes နှင့် အင်ဆူလင်ဟော်မုန်း အလုံလောက် ထုတ်လုပ်နိုင်သော်လည်း ဆဲလ်များမှ အင်ဆူလင်ကို ကောင်းစွာ အသုံးမပြု နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ရသော Insulin Resistance ခေါ် Type2Diabetes Mellitus ဟူ၍ အဓိက အမျိုးအစား နှစ်မျိုး ရှိ်ပါသည်။ Type 1 Diabetes သည် ၁၀% ဖြစ်၍ ကလေးများနှင့် လူငယ်လူရွယ် များတွင် စတင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ Type2Diabetes သည် ၉၀% ဖြစ်၍ အသက် ၄၀ ပတ်ဝန်းကျင် အရွယ်မှစ၍ အ၀လွန်ခြင်းနှင့် တွဲလျက် စတင် ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ အမျိုးအစား နှစ်မျိုး စလုံးသည် အသက်အရွယ် မရွေးတွင် စတင် ဖြစ်ပွား နိုင်သောကြောင့် ၎င်းအား ရာနှုန်းပြည့် ပုံသေ ယူ၍ မရပဲ အမျိုးအစား နှစ်ခုကို အသေအချာ ခွဲခြား သတ်မှတ်ပြီးမှ မည်သည့် အမျိုးအစား ဖြစ်သည်ကို အတည်ပြု ရမည် ဖြစ်သည်။ ဆီးချိုရောဂါကို စစ်ဆေး သတ်မှတ်သည့် နည်းတချို့ရှိသော်လည်း အရိုးရှင်းဆုံး ရောဂါ သတ်မှတ်သော နည်းမှာ အနည်းဆုံး ရှစ်နာရီခန့် အစာ မစားထားသည့် အချိန်၌ သွေးထဲတွင် ဂလူးကို့စ် ပမာဏကို စမ်းသပ် ကြည့်၍ တလီတာတွင် ၈ မီလီမိုးလ် (8mmol/L) ကျော်ပါက ဆီးချိုရောဂါ အဖြစ် သတ်မှတ် နိုင်ပါသည်။
ဆီးချိုရောဂါတွင် အင်ဆူလင် ဟော်မုန်းသည် အဓိက အခန်း ကဏ္ဍမှ ပါဝင် နေသောကြောင့် အင်ဆူလင် ဟော်မုန်း အကြောင်းကိုလည်း သိထား သင့်ပေသည်။ အင်ဆူလင်သည် ပန်ကရိယထဲရှိ ဘီတာဆဲလ်မှ ထုတ်လုပ်သော ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ် ဓါတ်ပြောင်းလဲမှုနှင့် သွေးထဲ ဂလူးကို့စ် ပမာဏကို ထိန်းညှိရန်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ဟောမုန်း တခုဖြစ်သည်။ ထမင်း၊ ပေါင်မုန့် ခေါက်ဆွဲ စသည့် ကာဗွန် ဟိုက်ဒရိတ်သည် ခန္ဓာကိုယ် ပုံမှန် အလုပ်လုပ် နိုင်ရန်အတွက် အဓိက လောင်စာဆီ ဖြစ်သည်။ စားသုံး လိုက်သော ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ် များအား အစာခြေညက်မှု လုပ်ငန်းစဉ် အရ အစာခြေ အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းမှ ဂလူးကို့စ် (သကြားဓါတ်) အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ ပေးလိုက် သောအခါ သွေးကြောထဲ၌ ဂလူးကို့စ် ပမာဏကို များပြား လာစေပါသည်။
အင်ဆူလင်ကို ထုတ်လုပ်သည့် နေရာနှင့် သွားသည့်လမ်းကြောင်း (dev.nsta.org/evwebs)
အင်ဆူလင် ဟော်မုန်း မမျှတခြင်းကြောင့် ဂလူးကို့စ်ကို ဆဲလ်မှ မစုပ်ယူနိုင်သောကြောင့် သွေးကြောထဲ၌ စုပြုံနေခြင်း (http://z.about.com/f/p/)
ထိုသို့ များပြား လာသောအခါ ပုံမှန် အခြေအနေ တွင် သွေးထဲရှိ ဂလူးကို့စ် ပမာဏကို 3-8mmol/L အတွင်း အမြဲတမ်း ရှိနေအောင် ပန်ကရိယမှ အင်ဆူလင်ကို လိုအပ်လျင် လိုအပ်သလို ထုတ်လုပ်ပြီး ထိန်းညှိ ပေးပါသည်။ ထို့နောက် သွေးထဲမှ ဂလူးကို့စ်များကို အရိုးတွယ် ကြွက်သားနှင့် အဆီကြွက်သားများထဲရှိ အင်ဆူလင် မီခိုသည့် ဆဲလ်များထဲသို့ ရောက်အောင် အင်ဆူလင်က ပို့ဆောင်ပေးသည်။ အင်ဆူလင်မပါပဲ ဂလူးကို့စ်သည် ဆဲလ်ထဲသို့ မ၀င်ရောက် နိုင်သောကြောင့် ဤနေရာ၌ အင်ဆူလင်သည် ဂလူးကို့စ်ကို ဆဲလ်ထဲသို့ ပို့ဆောင်ရာ၌ ဆဲလ်တခါးကို ဖွင့်ပေးသည့် သော့ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အင်ဆူလင်သည် ဂလူးကို့စ် ချေဖျက်ခြင်းနှင့် အဆီတစ်ရှူးထဲရှိ အဆီများကို ချေဖျက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် အသားဓါတ်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် (Protein synthesis) ဆဲလ်များမှ စားသုံး၍ ပိုသျှံသော ဂလူးကို့စ်များအား အသည်းထဲ၌ သိမ်းထား ပေးသည်။
သို့သော် ဆီးချိုရောဂါတွင် အင်ဆူလင်ကို ပုံမှန်အတိုင်း အသုံးမပြု နိုင်ခြင်းကြောင့် သွေးထဲ ဂလူးကို့စ် ပမာဏကို ပုံမှန်အတိုင်း ထိန်းချုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ Type 1 diabetes တွင် အင်ဆူလင်မပါပဲ သို့မဟုတ် အင်ဆူလင် မလုံလောက်ပဲ ဆဲမှ ဂလူးကို့စ်ကို မရနိုင်သကဲ့သို့ Type2Diabetes တွင် အင်ဆူလင်ကို ဆဲလ်က အသုံးပြုနိုင်စွမ်း မရှိသောကြောင့် ဆဲလ်မှာ အစာ ပြတ်လပ်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ထိုအခါ ဂလူးကို့စ်သည် သွေးကြောထဲ၌ လှည့်လည်နေပြီး သွေးထဲ သကြားဓါတ် လွန်ကဲခြင်း (Hyperglycaemia) ကို ဖြစ်စေပါသည်။ ဤသည်ပင် ဆီးချိုရောဂါ၏ အဓိကမူလ ပြဿနာ ဖြစ်ပေသည်။
သွေးထဲ ဂလူးကို့စ် လွန်ကဲနေမှုကို အချိန်မီ မထိန်းညှိ ပေးနိုင်ပါက ဆဲလ်များ ရေဓါတ် ခန်းခြောက်ခြင်းကြောင့် ရေငတ်ခြင်း၊ သွေးထဲရှိ ဂလူးကို့များကို ကျောက်ကပ်မှတဆင့် ဆီးအဖြစ် စွန့်ပစ်ရသောကြောင့် ဆီးထဲ သကြားဓါတ် များပြားပြီး ဆီး မကြာခဏ သွားခြင်း၊ ညဘက် အိပ်ရေးပျက် လောက်အောင် ဆီးခဏခဏ သွားခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ တခြား သတ္တုဓါတ်များ မညီမျှဖြစ်ခြင်း (Electrolyte imbalance) နှင့် ဆဲလ်များ အစာမရခြင်း ကြောင့် ဆာလောင်ခြင်း၊ အားအင်ကုန်ခန်းခြင်း စသည့် လက္ခဏာများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဆီးချိုရောဂါအား အချိန်မီ ကုသခြင်း မပြုလုပ်ပါက ရေတိုနှင့် နာတာရှည် ဆက်ပွားရောဂါ အန္တရာယ်များအား မလွဲမသွေ ကြုံတွေ့ ရမည် ဖြစ်သည်။
ကုသမှုနှင့် ဆက်ပွား ရောဂါများအား ဆက်လက် ဖေါ်ပြပါမည်။
McCane, K.L. & Huether, S.E. (2006). Pathophysiology: The Biological Basis for Disease in Adults and Children, (5thed). (pp 700-720). USA: -Mosby.
Semb, S. (2005). Nursing management: Diabetes mellitus. In Brown, D., & Edwards, H. (Eds.). Lewis’s medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems (2nd ed.). (pp 1272-1299). Marrickville, NSW: Elsever.
Posted by wynn.sun 1 comments
Posted by byakga5comments
အဆစ်အမြစ် ယောင်ခြင်း နာခြင်း
အင်္ဂလိပ်လို Arthritis ဆိုတဲ့စကားဟာ အဆစ်အမြစ် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ တောင့်တင်းခြင်း နဲ့ ယောင်ကိုင်းလာခြင်း စတာတွေ အားလုံးကို ယေဘူယျခြုံပြောလိုက်တာပါ။ တဆစ်ပဲနာနာ နှစ်ဆစ်ပဲနာနာ အဆစ်နာရောဂါပါပဲ။ ဆရာဝန်များ ယခုအချိန်ထိ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသလောက်ဆိုရင်တော့ အဆစ်နာရောဂါပေါင်းဟာ ၁၀၀ ကျော်ကျော်ရှိပါသတဲ့။ အဆစ်နာရောဂါဟာ ဘယ်လောက် အဖြစ်များ သလဲဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်က လူ ၅ ယောက်မှာ ၁ ယောက် နှုန်းဖြစ်နေပါတယ်။ အဆစ်နာအမျိုးပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ထဲက အဓိက ဖြစ်လေ့ရှိတာကတော့ Osteoarthritis လို့ခေါ်တဲ့ပွန်းစားအဆစ်နာဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုကတော့ မြန်မာပြည်မှာ သိပ်တွေ့ရလေ့မရှိသော်လည်း အနောက်တိုင်းအဖြစ်များတဲ့ Rheumatiod arthritis ခေါ် သွေးလေးဖက်နာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့ အဆစ်နာရောဂါကို လုံးဝပျောက်ကင်းအောင်ကုလို့ရတဲ့ ဆေးမရှိသေးပါဘူး။ ဆေးဝါးလေးနဲ့ နဲနဲထိန်း၊ တဖက်ကလည်း လေ့ကျင့်ခန်းလေး ဘာလေးလုပ် စသည်ဖြင့်တော့ အဆစ်နာခြင်းကို သက်သာအောင် ကြံဖန်လုပ်နေကြရတာပါပဲ။ အဲဒီအထဲမှာမှ ကျန်းမာရေးအသိရှိခြင်း နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းတို့ကလည်း အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။
အဆစ်နာခြင်းဟာ ကျားမ မရွေး အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် တချို့သော အဆစ်နာရောဂါတွေကတော့ ဒုတိယအရွယ်နဲ့ တတိယအရွယ်တွေမှာ ပိုအဖြစ်များကြပါတယ်။ အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ -
- အချိန်ပြည့် အဆစ်ထဲမှ ကိုက်ခဲနေခြင်း နှင့် လှုပ်ရှားမှုပြုသည့် အခါ ပိုဆိုးဝါးစွာနာခြင်း
- အဆစ်နှင့် အနီးတ၀ိုက်တွင် ယောင်ခြင်း၊ တောင့်ခြင်း၊ နီခြင်း၊ ပူခြင်း
- အဆစ်ကို ပုံမှန်အတိုင်း ကွေး ဆန့် မရတော့ခြင်း
- အဆစ် ၏ ပုံသဏ္ထာန် ပျက်ယွင်းသွားခြင်း
- အကွေးအဆန့်ပြုလုပ်ရာတွင် အဆစ်အတွင်းမှ ပုံမှန်မဟုတ်သော အသံများထွက်ခြင်း စသည်တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီရောဂါလက္ခဏာတွေကို တချို့က လေးဖက်နာလက္ခဏာတွေလို့ သတ်မှတ်ပြီး ရောဂါကိုလည်း လေးဖက်နာရောဂါလို့ နာမည်တပ်ကြပါတယ်။ တကယ်ကတော့ လေးဖက်နာရောဂါဆိုတာ အဆစ်နာရောဂါတွေထဲက အချို့ပါပဲ။
အရိုးနှစ်ခုဆက်တဲ့နေရာဟာ အဆစ် ပေါ့လို့ လွယ်လွယ်ပြောရင်ရပါတယ်။ အဆစ်တစ်ခု လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ ဘာတွေပါရသလဲ ဆိုတာတော့ သိထားရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
- Muscles ကြွက်သားများ - အဆစ်ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အရိုးများနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် ကြွက်သားများသည် လှုပ်ရှားမှု အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
- Tendons အရွတ်များ - ကြွက်သားများ နှင့် အရိုးများကို ဆက် ထားသော အရာကို အရွတ် ဟုခေါ်သည်။
- Ligaments အကြောများ - သည် အရိုးတစ်ခုနှင့် တစ်ခု အလွယ်တကူ ပြုတ်မထွက်သွားရန် တွဲဆက်ထားပေးသည်။
- Cartilage အရိုးနု - များသည် အရိုး တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တိုက်ရိုက်ထိတွေရာတွင် ပွန်းစားမှုသက်သာစေသည်။
- Synovial membrane - အဆစ်အတွက် သဘာဝချောဆီ ကိုထုတ်ပေးသည်။
- Bursa - ကြွက်သားအချင်းချင်း အကြား၊ ကြွက်သားနဲ့ အရိုးကြား အကြားလှုပ်ရှားမှုကောင်းစေသည်။
အပေါ်မှာပြောခဲတဲ့ အဆစ်တစ်ခုမှာပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် အဆစ်နာတော့တာပါပဲ။ သွေးလေးဖက်နာရောဂါ Rheuamtiod arthritis မှာဆိုရင် အဆစ်အမြှေးပါးယောင်လို့ဖြစ်တာပါ။ Ankylosing spondylosis ဆိုရင်တော့ ခြေဖနောင့်နဲ့ ခါးဆစ်တွေမှာရှိတဲ့ အရိုးနဲ့ ဆက်နေတဲ့ အရွတ်တွေ ယောင်လို့ဖြစ်တာပါ။ အဆစ်အတွင်း ပုံဆောင်ခဲ အနယ်ကျခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါကိုတော့ ဂေါက်ရောဂါလို့ အသိများကြပါတယ်။ အဆစ်တစ်ခုခုထဲကို အခန့်မသင့်ပဲ ရောဂါပိုးဝင်သွားခြင်းကြောင့်လည်း အဆစ်နာနိုင်ပါတယ်။ အရိုးနှစ်ခု တိုက်ရိုက်မထိတွေ့ရအောင် ကြားခံထားပေးတဲ့ အရိုးနုတွေ ကာလကြာမြင့်သည်နှင့်အမျှ ပွန်းစားသွားသောကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ ပွန်းစားအဆစ်နာရောဂါကတော့ အဖြစ်အများဆုံးပါပဲ။ ထိခိုက်မိခြင်းကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ အခြားသော အကြောင်းများကြောင့် သော်လည်းကောင်း အဆစ်နာခြင်းများဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခံစားရတာခြင်းမတူသလို ကုထုံးများလည်း ကွဲပြားကြပါတယ်။ တစ်ယောက်ထဲတောင် တစ်ရက်နဲ့ တစ်ရက် ရောဂါလက္ခဏာ အပြင်းအပျော့ခြင်း တူချင်မှတူမှာပါ။ ကုထုံးတွေလည်း အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ရှိပါတယ်။
- လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံး - အလေးမခြင်း၊ ရေပူနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ ထိုက်ချိ
- အထောက်အကူပစ္စည်းများ သုံးပြီးကုခြင်း
- ဆေးဝါးများ အကူအညီယူခြင်း - အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ လေးဖက်နာဆေး စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
(ဆေးဝါး အမည်များကိုတော့ မဖေါ်ပြတော့ပါ။)
အဆစ်နာအတွက်ဆေးဝါးများသောက်မည်ဆိုပါက နီးစပ်ရာဆရာဝန်၏ ညွန်ကြားချက်ဖြင့်သာ သောက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆစ်နာအကြောင်း အရှည်ကြီးပြောခဲ့ပြီးပြီ။ မမေ့ရမယ့် အချက်ကလေး ၃ချက်ပဲရှိပါတယ်။
- အဆစ်နာ ဆိုတာ အဆစ်နာတဲ့ ရောဂါအကုန်လုံးကို ယေဘူယျခြုံခေါ်ထားတာပါ။ (လေးဖက်နာဆိုတာက အဆစ်နာရောဂါရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေး တစ်ခုပါ။ ကျနော်တုိ့မြန်မာ အများစုက အရိုးအဆစ်နာပြီဆိုရင် လေးဖက်နာလို့ လွယ်လွယ်ခေါ်ချင်ကြပါတယ်။ လေးဖက်နာကို ဆရာဦးချစ်စိုးက ပိုးလေးဖက်နာ၊ သွေးလေးဖက်နာ၊ အရေပြားလေးဖက်နာ စသည်ဖြင့် ခွဲပြဘူးပါတယ်။)
- အဆစ်နာအမျိုးပေါင်း ၁၀၀ကျော်ရှိပါတယ်။
- အဆစ်နာအများစုမှာ နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ အဆစ်ကို ငြိမ်ငြိမ်လေးထားမယ့် အစား လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှသာ နောင်တစ်ချိန် အဆစ်တောင့်ခဲသွားခြင်းနဲ့ ကြွက်သားသိမ်သွားခြင်းတို့ကို ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by byakga 1 comments
Posted by Ulmuka2comments
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လေမုန်တိုင်းဒဏ် ခံရပြီးနောက် မိမိအသိစိတ်ဓါတ်ဖြင့် လုပ်အားပေးကူညီကြသော အဖွဲ့အစည်းများစွာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ စာရေးသူလည်း ထိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင် ပါဝင်လုပ်အားပေးလျက်ရှိသည်။ ထိုသို့ လုပ်အားပေးစဉ် ကြားသိလာရသော လုပ်အားပေးများနှင့် ပတ်သက်သည့် အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် လက်လှမ်းမီသလောက် ဖတ်ရှုလေ့လာထားသည်များကို ပြန်လည် ဝေငှလိုက်ပါသည်။
လုပ်အားပေး ရွေးချယ်ခြင်း (Recruitment)
လုပ်အားပေး ရွေးချယ်ရာတွင် အသင်းအဖွဲ့နှင့် တွဲ၍ လုပ်ဆောင်တတ်မှုက ၄င်းမည်သည့် ပညာ တတ်ကျွမ်းသည် ဆိုသည်ထက် ပိုအရေးကြီးသည်။ မလုပ်တတ်သည်များကို သင်ပေး၍ ရနိုင်သော်လည်း အသင်းအဖွဲ့ စိတ်ဓါတ်ရှိလာရန် ကိုမူ လွယ်လွယ်ကူကူ သင်ကြားပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
လုပ်အားပေးရာတွင် အဆင်ပြေနိုင်မှု ရှိမရှိကို ၄င်း ယခင် လုပ်အားပေးခဲ့ဖူးသည့် ကိစ္စများမှ၎င်း၊ အစမ်း လုပ်အားပေးစေခြင်းဖြင့်၎င်း သိရှိနိုင်သည်။
လူတွေ့မေးရာတွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော မေးခွန်းများကိုသာ မေးသင့်သည်။ သို့မှသာ လျှောက်ထားသူ တစ်ဦး နှင့် တစ်ဦး ကွာခြားမှုကို သိရှိနိုင်မည်။
လုပ်အားပေးများကို တာဝန်ပေးခြင်း (Placement)
လုပ်အားပေးရန် အချိန် အတိအကျ သတ်မှတ်ပေးရန်လိုသည်။ လုပ်အားပေးသူများသည် မိမိတို့စီမံချက်အတွက် အဆုံးမရှိ အစမရှိ၊ နေ့ရော ညပါ အချိန် ပေးရမည်ဟု ယူဆထားလျှင် လက်တွေ့မကျပေ။
လုပ်အားပေးများ၏ နဂို လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ပညာရပ် အတွေ့အကြုံများကို တတ်နိုင်သလောက် အသုံးချစေရန်။
လုပ်အားပေးများ အားလုံး တန်းတူညီမျှမှုရှိစေရန်။ တစ်ဦးဦးကို ပစား ပေးခြင်းမျိုး ရှောင်ကြဉ်ရန်။
ပွင့်လင်းမှုရှိရန်။ လျှို့ဝှက်ချက်များ ထားရှိခြင်းဖြင့် လုပ်အားပေးများအကြား မယုံကြည်မှုကိုသာ တိုးပွားစေမည်။ စီမံချက်နှင့် ပတ်သက်၍ တတ်နိုင်သရွေ့ ပွင့်လင်းစွာ ဆက်ဆံ အသိပေးသင့်သည်။
လုပ်အားပေးများအား တာဝန်ပေးရာတွင် ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခွင့်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရန်။
လုပ်အားပေးများ အနေဖြင့် ဆက်လက်လုပ်အားပေးလိုသော ဆန္ဒ မရှိပါက ၄င်းတို့ သဘောအတိုင်း ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိကြောင်း မိမိတို့အဖွဲ့က နားလည် သဘောပေါက်ထားရန်။
လုပ်အားပေးများ လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်များ၊ နှင့် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများကို တိကျ ရှင်းလင်းစွာ ပြောပြထားရန်။
လုပ်အားပေးများ ဆက်လက်ပါဝင်မှု ရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း (Retention)
လိုအပ်သော သင်တန်းများ ပေးခြင်း။
မူလကပင် သေချာစွာ စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် လူမှန် နေရာမှန် တာဝန်ပေးခြင်း။
လုပ်အားပေးတစ်ဦးက အခြား တစ်ဦးကို ခေါ်ဆောင်လာခြင်း။
အများအားဖြင့် အသက် ၂၄ နှစ်ထက်ငယ်သော လုပ်အားပေးများသာ အဓိက ပါဝင်နေခြင်း။
လုပ်အားပေးများကို ကြီးကြပ် လမ်းညွှန်မှု မပေးခြင်း။
လုပ်အားပေးများနှင့် ဆက်ဆံရေး မပြေပြစ်ခြင်း။
လုပ်အားပေးများ အကြောင်းမဲ့ ပျက်ကွက်ခြင်း၊ အချိန်မှန် မလာရောက်ခြင်း။
လုပ်အားပေးများအတွက် ငွေအကုန်အကျ မခံခြင်း။
Managing the placement of volunteers: A VSO guide.
Volunteer Management: Practices and Retention of Volunteers. Mark Hager, Jeffrey Brundney. The Urban Institute. June 2004.